Mashruuca Kala Baxida: Sas Trapnell, Kanaalka Magaalada Delaware - Ellicott Dredges
Bishii Abriil 1984, SAS Trapnell, Ellicott® brand Taxanaha 370 dredge, waxaa laga soo saaray balliga Noxontown ee u dhaw Middletown. Hadda sannaddeedii saddex iyo tobnaad ee adeeggiisa, qashin-qubka ayaa soo bandhigay qaab lagu soo celiyo oo loo bixiyo dayactir lagu sameeyo balliyada iyo qeybaha kale ee biyaha ee gobollada New Castle iyo Kent labadaba.
Sanadkii la soo dhaafay wuxuu ahaa mid aad mashquul u ahaa SAS Trapnell iyo shaqaalihiisii. Mashruuca harada Moores Lake waa la dhammeystiray ka dib markii in ka badan 75,000 mitir kiyuubik oo faaruq ah laga qodayey harada. Qoditaanka waxaa loo sameeyay si xasaasi ah baahiyaha nolosha biyaha harada. Doonyaha 'Trapnell' kadib waxaa loo wareejiyay xeebta Augustine, halkaas oo loo xilsaaray inay alaab ka dhigaan hareeraha doonida oo ay ku sii daayaan xeebta koonfureed ee biya-dhaca biyaha aagga 60,000 oo laba jibbaaran.
Markii la dhammaystiray mashruucii xeebta Augustine, Trapnell ayaa mar kale loo raray, markanna waxaa loo raray magaalada Delaware si looga qodo dooxada magaalada iyo afka kanaalka buuxiya kanaalka. Qoditaanka waxaa loo sameeyay si loo kordhiyo qoto dheer ee saxanka. Si loo soo celiyo qoto dheer, qodqodku wuxuu sameeyay 8-fuudh gooyn ah, oo ah mid ka mid ah kuwii ugu weynaa ee Trapnell uu abid sameeyo.
Dharka caadiga ah ee lagu qoro qulqulaha ayaa ka sii darey sanadkii la soo dhaafay taas oo ay ugu wacan tahay qiyaaso aad u sarreeya oo ah wasakhda qashin-qubka ee lagu soo daadiyay tuubooyinka iyo tuubooyinka. Caadi ahaan mashruuc kasta kadib, qulqulka biyaha ayaa laga soo saaraa biyaha waxaana la sameeyaa dayactir. Si kastaba ha noqotee, xitaa iyada oo culeyska culus ee sanadkaan, qulqulka ayaa hoos u dhacay labo toddobaad kaliya markii loo baahnaa dayactir. Ka sokow dayactirka lagama maarmaanka u ah qulqulka, dhowr qaybood oo qalab ah ayaa la soo iibsaday oo ay la socdaan amar loogu tala galay doonida cusub ee lugta ee 16-foot. Waxyaabahan cusubi waxay sii kordhin doonaan howlgalka qulqulka.
Mashruuca soo socda ee la soo jeediyey waa qodaalka harada Garrisons. Dhowr mashruuc oo kale oo loo aqoonsaday qodista mustaqbalka waa Becks Pond, Little Mill Creek, iyo St. Andrews (Noxontown Pond.) Fursadaha muddada-dheer waa Churchman's Marsh, Lums Pond, iyo Lums Pond Marina.
Waxaa dib looga daabacay Ellicott® International